Sidecar: Istaraatijiyadaha Xayeysiinta Amazon ee Xogta Lagu Wado | Martech Zone
Talaado, Oktoobar 1, 2019 Talaado, Oktoobar 1, 2019 Douglas Karr
Amazon ma aha oo kaliya barta ugu weyn ee e-commerce ee shabakadda, sidoo kale waa hormuud madal xayeysiin ah. In kasta oo dhagaystayaasha Amazon ay aad u tiro badan yihiin booqdayaashuna ay yihiin kuwa iibsanaya, marinka kanaalka ayaa cadeynaya inuu yahay mid aad u dhib badan.
La bilaabay isbuucii hore, Sidecar loogu talagalay Amazon waa madal ay ku shaqeyso AI heer sare ah iyo ka shaqeynta luqadda dabiiciga ah. Mashruucu wuxuu ka caawiyaa dukaamada tafaariiqda inay adeegsadaan istiraatiijiyado xog ku saleysan iyo hababka ugu fiican ee la caddeeyay si dakhli badan looga saaro Alaabooyinka ay kafaala qaadayso Amazon, Noocyada La Isboonsiiyey, Iyo Muujinta Xayeysiinta.
Iyada oo si gaar ah diiradda loo saarayo xallinta caqabadaha suuqgeynta waxqabadka ee tafaariiqleyda, waxay noo aheyd kordhin dabiici ah inaan dhisno xallil wax ka qabta arrimaha ay macaamiisheennu kala kulmayaan Xayeysiinta Amazon.
Mike Farrell, Agaasimaha Sare ee Suuqa iyo Sirdoonka Macaamiisha ee Sidecar
Teknolojiyada Sidecar waxay si toos ah u shaqeysaa maaraynta gacanta, waxay hagaajineysaa warbixinta, waxayna ka faa'iideysanaysaa khibradda suuqgeynta shirkadda si loogu furo fursado cusub Amazon.
Sidecar ee faa'iidooyinka Amazon:
Ku adkee ololeyaasha si aan xanuun lahayn - Ku tiirsanaanta otomaatigga 'Sidecar' si aad ula qabsato ololeyaasha isbeddellada sida cusbooneysiinta istiraatiijiyadda iyo isbeddellada waxqabadka.
Waqti badbaadin & mala awaal - Yaree jahwareerka ku saabsan barashada kanaal cusub. Waqtigaaga uga wareeji saadka xayeysiinta istiraatiijiyada ganacsiga iyo inta kale ee Amazon Flywheel.
Ogeysii istiraatiijiyad isdaba marin - Si fudud ugu dar fikradaha kanaalkaaga xayeysiinta kale Amazon si aad u wadato istiraatiijiyad isku duuban.
Keen daahfurnaan si loo tabin karo - Aragti cad ka hel sida alaabtu iskula jaanqaadayso xayeysiiska. Ficil ku qaado sida ay xayeysiintu wax ugu kordhinayso khadkaaga hoose.
Sidee Sidecar loogu talagalay Amazon u shaqeeyaa
Iyadoo la adeegsanayo tiknoolajiyada Sidecar ee xeeladaha wax ka qabata, kooxdooda u heellan waxqabadka suuqgeynta waxqabadka ayaa kula wadaagaya si aad u waddo istiraatiijiyadda kanaalka. Natiijada? Waxqabadka iibka ee la dedejiyay iyo faa'iidada xoogan ee tartanka waxaad cabbiri kartaa oo sheegi kartaa.
Dhismaha Qaabdhismeedka Ololaha - Ka fogow madax xanuunka adoo gacanta ku dhisaya ololayaasha xayeysiinta ee Amazon. Sidecar wuxuu abuuraa qaab dhismeed ololeysan iyadoo loo xilsaarayo badeecadaha si isku mid ah wax u qabashada kooxaha xayeysiiska ah isla markaana dhigaya dalabyo caqli badan oo dusha sare ka iibiya inta gadaal loo jiidayo qarash gareeyayaasha. Tiknoolajiyadaan otomaatigga ah ayaa had iyo jeer shaqeynaya oo shaqeynaya si loo hubiyo in qaabdhismeedka si joogto ah loo hagaajiyo iyadoo lagu saleynayo isbeddelada waxqabadka ama sida alaabada cusub loogu daro.
Maareynta U-qalmitaanka Xayeysiinta - Ka tirtir baahida loo qabo in gacanta looga saaro alaabooyinka ololayaasha. Nidaamka otomaatiga ah wuxuu ka shaqeeyaa xirmooyin xeerar ganacsi oo lagu qeexay tafaariiqleyda si loo maareeyo u-qalmitaanka xayeysiinta sheyga iyadoo lagu saleynayo xadadka ama siyaasadaha sumadda.
Raadi Maareeyaha Su'aasha - Kordhi awoodda aad ugu beddeli karto kuwa wax iibsada ee ujeeddada sare leh ereyada muhiimka ah ee saxda ah. Adoo adeegsanaya ka shaqeynta luuqada dabiiciga ah, Sidecar waxay si isdaba joog ah u qiimeyneysaa weydiimaha raadinta si loo ogaado shuruudaha cusub ee iibsadayaashu u adeegsanayaan inay soo ogaadaan alaabadaada. Sidecar wuxuu bixiyaa aragtiyo iyo talooyin hodan ah oo haddii kale aan laga heli karin barta Amazon.
Maamulka Bid - Samee go'aanno caqli-gal ah, otomaatig ah. Qeybaha dalab ee soo jeedinta ee Amazon badiyaa kama tarjumayo waxqabadka dhabta ah, taasoo u horseedaysa dukaamada iibinta inay sameeyaan isbeddel dalab aan loo baahnayn. Sidecar wuxuu si firfircoon u hagaajiyaa dalabyada koox kasta oo xayeysiis ah iyo ereyga muhiimka ah si loo kordhiyo waxqabadka badeecad kasta.
Warbixinta iyo Muuqaalka Xogta Fur furaha xogta Amazon. Iskuday la'aanta daaqadaha warbixinta xadidan ee Amazon, tiknoolajiyada Sidecar waxay muujineysaa waxqabadka ololaha xayeysiinta oo leh isbuucyo usbuuc ka badan iyo isbarbardhig bil-bil ah. Taasi waxay ku siinaysaa aragti cad oo ah sida xayeysiintu u saameyn ku yeelaneyso koritaanka.
Sidecar loogu talagalay Amazon waxay dhameystireysaa xariiqa jira ee shirkadda ee xalalka kanaalka, oo ay kujirto taageerada shopping iyo ololeyaasha raadinta mushaharka leh on Google iyo Bing, iyo sidoo kale ololayaasha guud ahaan Facebook / Instagram iyo Pinterest.
Khabiirada Sidecar ha u kashifaan fursado cusub Amazon iyaga oo adeegsanaya falanqeyn wax ku ool ah oo bilaash ah, oo aan waajib ku ahayn:
Hel Falanqeyn Bilaash ah oo ka timid Sidecar
Tags: Noocyada Amazon SponsoredAlaabooyinka ay kafaala qaadayso Amazonsidecar amazon